सार्वजनिक सवारीमा डस्टविनको प्रयोग – नियम बन्यो, कार्यान्वयन भएन
पंकज धामी सोमवार, भदौ ९, २०७६, २०:५७:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । कोटेश्वरबाट रत्नपार्कका लागि छुटेको अन्नपूर्ण सार्वजनिक यातायातमा सानुमाया तामाङ र उनकी छोरी ८ वर्षीया प्रिया तामाङ शान्तिनगर गेटबाट चढे । बस यात्रुहरुले खचाखच थियो । सिट नभेटेपछि उनीहरु ड्राइभर छेउको बनोट (इञ्जिनमाथि) मा बसे ।
बसमा चढ्ने बेलादेखि नै प्रियाका हातमा ललिपप (चकलेट) थियो । उनले दाँतले ललिपपको खोल निकालिन । त्यतिकैमा ललिपपको खोस्टा खस्न पुग्यो, उनले टिपिन । फेरि खस्यो, उनले फेरि टिपिन ।
हातबाट चकलेटको खोस्टा खसिरहेपछि उनले गाडीमा डस्टबिन छ कि भनि यता उती चिहाइन् तर भेटिनन् । नभेटेपछि उनले आफ्नी आमालाई भनिन्, आमा यो कहाँ फालौँ ? ‘झ्यालबाट बाहिर फाल्देउ ।’ आमाले जवाफ फर्काईन् ।
तर प्रिया भने अलमलमा परिन् । न उनले आमाले भनेजस्तै चलकेटको खोल बाहिर फाल्न सकिन्, न गाडीमा त्यतीकै मिल्काउन ।
गाडीमै रहेका एक यात्रीले प्रियालाई चकलेटको फोहर खल्तीमा राख्न सुझाव दिए ।
तर प्रियाको लुगामा खल्ती थिएन । उनी एक हातमा ललिपप र एक हातमा चलकेटको फोहरनै लिएर बसिन् ।
त्यस्तै धापासी बस्ने प्रविन धामी टँुंडिखेलमा भएको एक कार्यक्रम (गौरा पर्व) हेर्न भदौ ६ गते ग्राण्डी अस्पताल अगाडीबाट गाडी चढे ।
सामाखुसी पार नगर्दै उनलाई वान्ता सुरु भयो । झ्यालबाट टाउको बाहिर निकाल्दै उनले वान्ता गरे । गन्तव्यमा झरेर मात्र उनले केही राहत महशुश गरे ।
भोलीपल्ट सपरिवार फेरि टुँंडिखेल गौरा हेर्न आए तर उनी आएनन् । कारण उनलाई गाडी देख्नै नहुने, त्यसमाथि साघुँरा र व्यस्त सडकमा टाउको बाहिर निकालेर वान्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यि दुई प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । उपत्यकामा सार्वजनिक यातयात चढ्नेले सर्वसाधारणले यस्तै सास्ती हरेक दिन व्यहोर्नु परेको छ ।
सरकारले करिब तीन वर्षअघि सार्वजनिक सवारी साधनमा फोहोर संकलनका लागि गुणस्तर बमोजिमको पोलिथिन थैलो वा डस्टबिन अनिवार्य राख्नुपर्ने नियम राखेको थियो । तर सो नियम अहिलेसम्म कार्यान्वय हुन सकेको छैन् । नियम लागु भएको करिब तीन वर्ष बित्न लाग्दा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
२०७३ साल पुस १ गतेबाट प्रत्येक सार्वजनिक सवारी साधनमा अनिवार्य एउटा डस्टविनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक यातायात छुट्नु भन्दा अगाडि सवारी चालकले यात्रुलाई डष्टबिनको प्रयोग गर्न अनुरोध गर्ने र यात्रुले गर्ने फोहोर वस्तुलाई तोकिएको ठाउँमा मात्र विसर्जन गर्ने गरि नियम बनाइएको थियो ।
लामो दुरीका केही यातायात व्यवसायीले यसको कार्यान्वयन गरेपनि उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा भने डस्टबिन र पोलिथनको व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम लागु हुन सकेको छैन ।
गाडीमा जम्मा भएको फोहोर विसर्जन गरिएको स्थलबाट नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाले फोहोर विसर्जन गर्ने अन्तिम स्थलमा पु¥याउने भनेर नियमन बनाइएको थियो ।
तर अहिलेसम्म धेरैजसो सार्वजनिक यातायातले नियम पालना गरेका छैनन् । डस्टविन राखिएका सवारी साधनमा समेत यसको प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले भने यस विषयमा उपत्यकाभित्र चल्ने सवारी साधन र अन्य स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ ।
महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले महानगरभित्रका सवारीको मात्रै नभएर अन्य जिल्लाका सवारी पनि आउने भएकाले व्यवस्थापनमा केही गाह्रो भएको बताए । ‘सबैसँग कुरा गरिरहेका छौँ । चाँडै नै कार्यान्वयनका विषयमा निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिवा सरोज सिटौलाले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । यातायात व्यवसायीनै नियम कार्यान्वयनमा गम्भिर नबन्दा सार्वजनीक यातायात चढ्ने यात्रुले सास्ती खेप्दै आउनु परेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातबाट निष्कासन हुने फोहरमैलालाई नियन्त्रण वा व्यवस्थित गर्न प्रत्येक सवारीमा ३० माइकोनमाथिको पोलिथिन थैलो वा डस्टविन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
नियमको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा सवारीका सञ्चालकलाई फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ बमोजिम ५ सयदेखि पाँच हजारसम्म जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । मर्करीजस्ता वातावरणलाई असर पार्ने सामग्री फालेको पाइएमा एक लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
प्रहरी भन्छः ‘काठमाडौं अझै सुरक्षित छैन’ सोमवार, जेठ १३, २०७६, १४:५२:००
'विकास निर्माणको एउटा मोडल तयार पारेर काम गर्नुपर्छ, अन्यथा हामीले दुःख पाउँछौ' जेसिबी चलाउन जान्न मान्छे अहिले सडक बनाउन जान्ने इन्जिनियरको रुपमा विकास भयो । कुन तरिकाको प्रविधि अपनाउने ? कति खर्च लाग्छ ? भन्ने कुराहरु हामीले इस्टमेट नबनाई काम अघि बढाउँदा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । सोमवार, असार १६, २०७६, १२:५४:००
यी हुन नेपालकै पहिलो महिला डोजर चालक (भिडियोमा) १६ को उमेरदेखि डोजर चलाउन थालेकी धिमिरेका संघर्षका तितामिठा अनुभव विस्तृतमा भिडियोमा हेर्नुहोस् । बिहिवार, जेठ २३, २०७६, १७:४६:००
‘सभामुखमा अब तेस्रो व्यक्ति’ : नेकपाबाट सिंगारिने पालो कस्को ?
गृहमन्त्रीको ‘घातक’ कदम : सुपुर्दगी सन्धिबिनै कैदी बुझाउने बाटो खोज्दै
बञ्चरे डाँडामा फोहोर लगिछाड्ने मन्त्री मानन्धरको जबरजस्त प्रयास